Mayelana — UHAMBO LEE - OFFICIAL SITE
Akhiwa ukuzigabisa ukhonela ukukhuluma esiqinile eqinisweni waseBhayibhelini labasha, izilaleli phakathi kwamasiko amabili ngezindlela kuhlanganyele futhi enamandla. Njengoba siholwa Trip Lee, umbhali, uthisha, futhi umculi we-hip hop, Akhiwa ukuzigabisa uhlose zakha ukhuthaze ukunyakaza kaKristu-abalandeli abakhuluphele unashamed ukuzigabisa on bo Lord.
Trip Lee kuyinto umbhali, uthisha, umculi we-hip hop, kanye nomholi umcabango. Umfundisi ku Atlanta, njalo ushumayela futhi lifundisa at izingqungquthela Christian kanye nemicimbi, futhi owenzé umculo wakhe ngoba izinkulungwane zezilaleli emhlabeni wonke.
Encwadini yakhe yokuqala, The Good Life, Lee ukhomba kuphila okuchichimayo kutholakala kuphela Kristu - ukuphila ngale yini izwe banganikeza. Incwadi yakhe yesibili, Rise, ubiza isizukulwane esisha ukuba bangalindi ukulandela uNkulunkulu, kodwa vuka lelungile futsi nyalo siphile.
Njengoba umculi we-hip hop, umculo kukaLee uye bemdumisa esibucayi, kuyilapho lafinyelela izihlwele futhi ezikhulayo. Uthi yawina umklomelo Stellar futhi kugqugquzele for Dove Awards eziningana. albhamu yakhe yokugcina amathathu wangenela at #1 on the amashadi Billboard iVangeli, futhi i-albhamu yakhe yamuva iningi, Rise, wangenela at #2 on the Billboard Rap amashadi kanye #16 on the Billboard 200.
Isifiso Trip ejulile ubhala, okufundisa, futhi lenza eyangabela ubuhle nenkazimulo kaJesu Kristu.
Ukuze ukubhuka uhambo Lee ukuze afundise, nishumayele, noma enze at umcimbi wakho, contact WME.